သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားသို့ရောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါ Gadget သတင်း
Ethe blogosphere အ ဘလော့ဂ်များ အဆိုပါအခြေခံဒြပ်စင် (၎င်းတို့၏အခြေခံယူနစ်) ဖြစ်ကြသည် လင့်များ သူတို့ကိုနှင့်ချည်နှောင်သောစာအုပ်ချုပ်သမားအရောအနှောဖွဲ့စည်း မှတ်ချက်များ ၎င်းတို့သည်ဤဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကိုအသက်ပေးသောလူမှုဆက်ဆံရေးဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။
Pကျွန်တော့်အတွက်, မှတ်ချက်မရှိဘဲဘလော့ဂ်ဟာစာအုပ်တစ်အုပ်လိုပါပဲ၊ ၎င်းကိုသင်ဖတ်ရှုပြီး၎င်းမှအသုံး ၀ င်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သင်ရေးသားသူနှင့် ဆက်သွယ်၍ သင်၏အမြင်များကိုသူနှင့်တိုက်ရိုက်မျှဝေရန်သင်ရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ သင်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်နေစဉ်၎င်းသည်အသက်ပြန်ရှင်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အတိတ်ဘ ၀ သို့ပြန်သွားသည်ကိုမမေ့သင့်ပါ။ သူ၏ဘ ၀ သည်စာရေးသူရေးသားခြင်းပြီးဆုံးသည့်အချိန်ဖြစ်သည် နှင့်သင်ဖတ်သည့်အချိန်မဟုတ်။ မှတ်ချက်များမပါသောဘလော့ဂ်တစ်ခုတွင်ထိုရေးသားချက်များသည်ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များကိုထင်ဟပ်စေပြီးနောက်ဆုံးပေါ်လုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်ပျော်ရွှင်သောဘလော့ဂါ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကျေးဇူးတော်မှသာအသစ်တင်သည်။
Éဒီထဲမှာဖြစ်ပျက်မထားဘူး မှတ်ချက်များနှင့်အတူဘလော့ဂ်များ၎င်းတို့တွင်သတင်းအချက်အလက်ကိုအသက်ဆက်ရှင်သန်စေရန်၊ မတူညီသောအမြင်များကိုဖော်ပြရန်၊ စာရေးသူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုစကားလုံးတစ်လုံးတည်းဖြင့်ဆွေးနွေးရန်၊ သဘောတူရန်နှင့်ဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ "စကားပြောဆိုရန်".
Eငါမှဖြစ်သည် မှတ်ချက်ပေးပါသူတို့မရှိရင် blogosphere ဟာအခြားစာကြည့်တိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာထားရမယ် သင့်ရဲ့ positioning ကိုမဟာဗျူဟာညီမျှနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုသည်သင့်အတွက်ဘာမျှမဆိုလိုပါကကျွန်ုပ်ပြောလိုသည်မှာသင်အနည်းငယ်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ အကယ်လို့သင်ဟာပရိသတ်ကိုရယူဖို့နဲ့သင့်ရဲ့တည်နေရာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီအရာတွေကတချို့ကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ် consejos.
သော့ချက်စာလုံးသိပ်သည်းဆကိုထိန်းချုပ်ပါ။ ရှာဖွေမှုအချို့အတွက်သင်နေရာချလိုပါကအချို့သောသော့ချက်စာလုံးများ၏သိပ်သည်းဆကိုထိန်းချုပ်ရမည်။ သငျသညျမှတ်ချက်များကိုလက်ခံရရှိသည်အတိုင်း, ကန ဦး သိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်နှင့် post ကို၏ထုတ်ဝေမီအလုပ်အားလုံးအသုံးမကျဖြစ်လာလိမ့်မည်။ မှတ်ချက်တခုခုတွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကရေးထားသည်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဟုတ်ကဲ့၊ မှတ်ချက်တစ်ခုမှာရေးထားတာကိုမင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ထွက်ခွာသောအခါမည်သူမျှသင်၏သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းမတွေ့ရပါက (၉၉% တွင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်) သင်ဖြေသည့်အခါ၎င်းတို့ကိုသုံးပါ။ ဤနည်းဖြင့်သင်ပို့စ်၏ကန ဦး သိပ်သည်းဆကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
သော့ချက်စာလုံးအရွယ်အစားတိုးမြှင့်: သင့်အနေဖြင့်စာတိုတိုများလုပ်လိုပါကအလုံအလောက်သော့ချက်စာလုံးများထည့်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ စာတိုအတိုတစ်ခုတွင်သော့ချက်စာလုံးတစ်လုံး (အကြိမ်အရေအတွက်ဆိုသည်ဆိုပါကဆိုလိုခြင်းမရှိပါ) ကိုအကြိမ် ၁၀၀ ထပ်၍ မလုပ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်လုပ်ခဲ့လျှင်၊ စာသားသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်သာဆွဲဆောင်မှုရှိလိမ့်မည်။ လူသားစာဖတ်သူသည်ထိုဆိုဒ်မှထွက်ပြေးလိမ့်မည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကသင့်ကိုမနှစ်သက်ပါကသင့်ကို spammer အဖြစ်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဖြေရှင်းနည်းကတဆင့်ပါ သော့ချက်စာလုံးများအတွက်အလတ်စားသိပ်သည်းဆနှင့်အတူ post တစ်ခုလုပ်ပါ ထို့နောက် (သောသင်၏ဆောင်းပါးပြည့်နှက်မရ) အခြားမှတ်ချက်များကိုသင်တုံ့ပြန်သောအခါသင်ပြုလုပ်သောမှတ်ချက်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်ဤသိပ်သည်းဆကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ဆောင်းပါးသည်စာဖတ်ခြင်းအတွက်အဆင်ပြေမည်ဖြစ်သော်လည်းစာမျက်နှာတစ်ခုလုံး၏သိပ်သည်းဆကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။
ရှာဖွေရေးကြိုးအသစ်များထည့်ပါ။ အပေါ်ကတူညီတဲ့ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကိုအသုံးပြုကြပါစို့။ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို search strings တစ်ထောင်နဲ့ပြည့်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့မှတ်ချက်များထဲမှာ string အသစ်တွေထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်။ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကိုမတင်မီသင်မစဉ်းစားဖူးသောရှာဖွေရေးစာကြောင်းအသစ်များကိုတွေ့သောအခါဤနည်းသည်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ သင်သည်သင်၏ stats ကိုစစ်ဆေးပြီးထပ်တလဲလဲ string ကိုရှာလျှင် သင်၏လည်ပတ်မှုများကိုသင်ပို့ပေးသည်၊ ထိုကွင်းဆက်အတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်မည်သည့်အနေအထားပေါ်လာသည်ကိုစစ်ဆေးရမည်။ သင်သည်ပထမနေရာကိုမရရှိပါကသင်သည်သင်၏မှတ်ချက်များတွင်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ထိုကွင်းဆက်ကိုအားဖြည့်နိုင်သည်။ ထိုစကားလုံးများ၏ပေါင်းစပ်မှုဖြင့်သင်၏လည်ပတ်မှုသည်မည်သို့တိုးပွားလာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပါကသင်၏ရာထူးကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်အမြဲမပါဝင်မိစေရန်သတိထားရမည် Over- optimization။ အကယ်၍ သင်သည်ပုံကြီးချဲ့။ spammer တစ်ခုသို့သွားလျှင်၊ သင်လုပ်သောအလုပ်နေရာကိုမြေပြင်သို့ပစ်လိုက်လိမ့်မည်။
ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်အရာရာတိုင်းရှိသည်ဟုသင်ထင်လျှင်မှတ်ချက်များကိုပိတ်ပါ။ လက်စွဲစာအုပ်များ၊ သင်ခန်းစာများစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးများတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလည်ပတ်မှုများနှင့်အတူမှတ်ချက်များသည်တူညီသောအရာနှင့်အမြဲတမ်းမေးခွန်းများထပ်ခါထပ်ခါမေးလေ့ရှိသောအချိန်ရောက်လာသည်။ မှတ်ချက်အရေအတွက်အတော်များများသို့ရောက်သောအခါသင်၏လည်ပတ်မှုသည်ယခင်မှတ်ချက်အရာရာအချို့တွင်သင်ရေးသားခဲ့ရာများကိုမဖတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းတို့သည်စာရင်း၏အဆုံးတွင်နောက်ထပ်မှတ်ချက်တစ်ခုထပ်ဖြည့်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏မေးခွန်းကိုသာထားခဲ့လိမ့်မည်။။ သင်တူညီသောမေးခွန်းများကိုထပ်ခါထပ်ခါဖြေ ဆို၍ မရနိုင်ပါ၊ သို့သော်သူတို့ကိုအဖြေမပေးဘဲထားခဲ့ပါကလာရောက်သည့်မည်သည့်ခရီးစဉ်မဆိုသင်၏ site သည်အရေးမကြီးဟုထင်ရနိုင်သည်သို့မဟုတ်ထိုတွင်သင်ရှာဖွေနေသည့်အကူအညီကိုသင်ရှာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်အကြံဥာဏ်က ဤကိစ္စများတွင်မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထားပြီးအသွားအလာကိုဆောင်းပါးအသစ်သို့ပြန်ပို့ရမည် အများဆုံးမကြာခဏသံသယဖြေရှင်းထားတဲ့အတွက်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်မှတ်ချက်များကိုဖြေကြားခြင်းမပြုဘဲ၊ တူညီသောမေးခွန်းများကိုထပ်ခါထပ်ခါဖြေဆိုရန်အချိန်ကုန်သက်သာမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုနေရာချရန်ကွင်းဆက်အသစ်များထည့်ရန်ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ခုသင်ရလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်များကိုဖျက်ပါ မှတ်ချက်ပေးရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သူထံမှမှတ်ချက်တစ်ခုကိုဖျက်ပစ်ခြင်းသည်တရား ၀ င်သလားသင်မှတ်ချက်ပေးရန်မည်သို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိပါက၎င်းကိုဖျက်ပစ်ခြင်းသည်တရား ၀ င်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်“ အရာအားလုံးကိုစာလုံးအကြီးဖြင့်မရေးပါနှင့်” ဟုသင်ဆိုလျှင်စာလုံးအသေးများ၌မှတ်ချက်တစ်ခုသင်တွေ့ရှိပါကဤမှတ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ရန်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အားလုံးအခွင့်အရေးရှိလိမ့်မည်။ သင်လုပ်သည်ဖြစ်စေမသည်သင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုလိုက်နာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် အကယ်လို့သင်ဟာသူတို့နောက်ကိုမလိုက်တဲ့မှတ်ချက်တခုကိုပယ်ဖျက်မိတာကိုစိတ်ဆိုးနေရင်၊ သူတို့ကသင့်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိတာကိုလည်းသင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့နားလည်ရလိမ့်မယ်။
သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာချထားမှုမဟာဗျူဟာကိုမလိုက်နာသောမှတ်ချက်များကိုပို့စ်တွင်မပိတ်ပါနှင့် မည်သည့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းအတွက်မဆိုရည်ရွယ်သည့်ဤကဲ့သို့သော post ကိုသင်လုပ်ပါကမှတ်ချက်များကိုဘဝအတွက်ပွင့်လင်းစွာထားခဲ့ခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။ အချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးနောက်မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထားသည့်ပလပ်ဂင်များကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်ခေတ်မှီသည်၊ မနေ့ကကျွန်ုပ်မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောပြီး၊ ငါ့ကိုပေးစာ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်ချက်တစ်ခုထားခဲ့၏၊ မှတ်ချက်များကိုပိတ်လိုက်သည်။ ဒါကငါ့နားလည်မှုအတွက် ဒါကကြီးလေးတဲ့အမှားပဲ။ သင်သည်မည်သည့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကွင်းဆက်တစ်ခုအတွက်မျှမယှဉ်ပြိုင်ပါကသင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ၎င်းကိုမယှဉ်သောရှာဖွေမှုများ၏အမြီးကိုကျွေးမွေးရန်ဖြစ်သည် (အမြီးရှည်) ။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာချထားမှုမဟာဗျူဟာမရှိပါက၎င်းသည်ရာထူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ကြီးထွားစေရန်၊ မှတ်ချက်များနှင့်အတူလက်တွဲပြီးဖြစ်သင့်သည်။ ရှည်လျားသောအမြီးများအတွက်ကောင်းသောမွေးမြူရေးမြေပြင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဤအခြေအနေများတွင်မှတ်ချက်များကိုပိတ်ခြင်းသည်အသစ်သောလည်ပတ်မှုများအတွက်တံခါးများကိုပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
troll သို့မဟုတ်အလားတူ prowling ရှိသည့်ပို့စ်တွင်မှတ်ချက်များကိုမပိတ်ပါနှင့်: ၎င်းသည်နေရာချခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုမရှိသော်လည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်စာမူတစ်ခု၏မှတ်ချက်များကိုပိတ်မည်၊ မပိတ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ မင်းက troll ကိုမတိုက်ဘူး၊ troll ကိုလျစ်လျူရှုတယ်။ သူထွက်သွားတဲ့ထင်မြင်ချက်များကိုဖျက်ပစ်ပါ။ ဘယ်တော့မှမပြန်ပါစေနှင့်။ သူသည်အနှေးနှင့်အမြန်ပျင်းရိသွားပြီးသင့်အကြောင်းမေ့သွားမှာပါ။ အကယ်၍ သင်က trolls တွန့်ဆုတ်နေသော site ပေါ်တွင်မှတ်ချက်များကိုသင်ပိတ်လိုက်ပါကသူတို့ကသူတို့အတွက်သင်လုပ်ပေးသည်ကိုသူတို့မသိဘဲစဉ်းစားကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါအခြားဆောင်းပါးတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်သင့်အား murga ကိုပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်မှတ်ချက်များကိုပျင်းသည်အထိဖွင့်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အလားတူအမှုဖြစ်ပျက် သင့်ရဲ့ visitors ည့်သည်တွေကိုဒေါသထွက်စေတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပေါ်လာတဲ့အခါသူတို့ကစော်ကားမှုပုံစံတွေကိုထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ၎င်းတို့သည် trolls များနှင့်မတူပါ၊ သူတို့သည်သင်၏တင်သည့်နေရာ၌အချို့သောကြင်နာမှုများကိုသာထားခဲ့ပြီးနောက်ဘယ်တော့မျှပြန်လာတော့မည်မဟုတ်။ နေ့တိုင်းငါစော်ကားမှုများစွာကိုခံယူ "PS3 ကိုဘယ်လို hack မလဲ"သူတို့ကိုငါဖတ်တယ်၊ ငါဖျက်လိုက်တယ်။ မည်သည့်စာမျက်နှာများတွင်ဤဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်စာမျက်နှာများကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားရမည်ကိုငါသိသည်။ အဲဒီစာမျက်နှာတွေမှာပါတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုငါပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါသထွက်နေတဲ့ visitors ည့်သည်တွေကသူတို့ချစ်ခင်ကြောင်းဖော်ပြမယ့်အခြားစာမျက်နှာတစ်ခုခုကိုရှာလိမ့်မယ်။ ပြproblemsနာများရှိသောစာမျက်နှာများရှိမှတ်ချက်များကိုမပိတ်ပါနှင့်၊ သင်ရရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာကထိုပြproblemsနာများကိုအခြားဘလော့ဂ်များသို့လွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်သည်.
Sဤအချက်များအားလုံးသည်ထွက်ပေါ်လာမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည် စက်မှုဇုန်အခြားသူများအတွက်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဂရုပြုခြင်းသည်အရူးဖြစ်လိမ့်မည်။ အချို့က၎င်းသည်အသုံးမ ၀ င်ဟုယူဆလိမ့်မည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်အောင်လုပ်သောကမ္ဘာကြီးတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ပို့စ်တစ်ခုတင်ရန်မျှော်လင့်ရန်စပျစ်ပင်အောက်၌နေရန်မလုံလောက်ပါ Google မင်းကိုချစ်မိ အကယ်၍ မင်းကသူ့ကိုထိပ်ဆုံးဆယ်ယောက်ကိုတံခါးဖွင့်စေချင်တယ်ဆိုရင်မင်းကထုတ်ဝေတာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့အပ်နှံခြင်းလိုတယ်ဆိုရင်မင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဘုရင်ကိုနှင်ထုတ်ရမယ်။ ငါဝမ်းသာပါလိမ့်မယ် မနည်းမများသော သင့်မှတ်ချက်များကိုဖြေပါ Vinegary နှုတ်ခွန်းဆက်စကား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားသို့ရောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါ
တစ် ဦး ကအလွန်ကြီးစွာသောဆောင်းပါး, ရှလကာရည်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါဝေဖန်မလာပါဘူး 😀
ဒါဟာ "အလယ်အလတ်" ကြိယာမှတ်ချက်လယ်ပြင်ကနေနှင်ထုတ်ခံရဖို့ရှိသည်ရှင်းပါတယ်။ ထိုအခါငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေး။ သင်အဆင့်သတ်မှတ်ချင်သောစကားလုံးများကိုအသုံးပြုရန်သင်၏စာဖတ်သူများကို“ ဖိတ်ခေါ်” ရန်မဟုတ်ပါ။ tags များကိုခွဲခြားရန်အတွက် tags များကိုသုံးခြင်းအပြင်မှတ်ချက်များတွင်သင်အသုံးပြုလိုသည့်စကားလုံးများနှင့်အတူအခြားလိုင်းတစ်ခုထည့်နိုင်သည်။ မှတ်ချက်ရေးတဲ့အခါပုံမှန်စာဖတ်သူတွေကသင့်ကိုအသုံးချတာကိုပိုနှစ်သက်မှာပါ။
ငါသည်သင်တို့ကိုအဆုံးမှာ "အလယ်အလတ်" ထွက်ဖြတ်ကျော်ပုံကိုကြိုက်တယ် ... hehehe
စာဖတ်သူတွေမှတ်ချက်ပေးနေတုန်းဆောင်းပါးရဲ့သိပ်သည်းမှုကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့သော့ချက်စာလုံးတွေကိုသုံးဖို့စာဖတ်သူတွေကိုငါအရမ်းခဲယဉ်းတယ်။ ထို့ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသူတို့သည်သင့်အားမျက်နှာသာပေးရန်သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။
ငါသိပ်သည်းဆကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, off ခေါင်းစဉ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိသည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ချပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ထိုကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘလော့ဂ်များ၏လူမှုဆက်ဆံရေးကိုစတင်ဖယ်ရှားပစ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်သည်ဆောင်းပါးပါအကြောင်းအရာများကိုသာသီးသန့်မှတ်ချက်ပေးပါကတည်နေရာမဟာဗျူဟာကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ အကြောင်းမှာဆောင်းပါးကိုရည်ညွှန်းသောအခါသော့ချက်စာလုံးများကိုငရဲအဖြစ်ရေးသားရန်ဖိအားပေးခံရခြင်းဖြစ်သည်။
အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ရှလကာရည်။ ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်များအတွက်တစ် ဦး ထက်ပိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အရမ်းကောင်းသောရှလကာရည်, ငါတကယ်ဆောင်းပါးကြိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးအားလုံးကိုယေဘူယျအားဖြင့်ဖြန့်ဝေလေ့ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၌မေးခွန်းတစ်ခုရှိကြောင်းသတိပြုပါ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကဒီသော့ချက်စာလုံးဟာ type tags တွေအကြားတခုခုကိုရှာနေသလား o ဦး ဦး ဥပမာ ?
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်ဘလော့ဂ်မှာနေရာချထားတာအတော်များများရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကိုမွမ်းမံနိုင်ရင်…။ 😉
အားကြီးသော / ခွန်အား>,
အလယ်ဗဟို> / အလယ်ဗဟို>,
href = » http: // »> / a>
လွယ်လွယ်ကူကူဖြေရှင်းနည်း၊ သော့ချက်စာလုံးများနှင့်သင့်ကိုယ်သင်မှတ်ချက်ပေးပါ။ ငါ plugin သို့မဟုတ်ပိုပြီးအလိုအလျောက်အရာတစ်ခုခုအားဖြင့်အံ့ had ခဲ့သညျ။
အကြံဥာဏ်သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လည်ပတ်ရန် trolls တစ်စုံတစ်ရာသို့မဟုတ် spammer တစ်ခုမျှသာမလိုက်နာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပို့စ်တွေကအရမ်းအေးပြီးတွက်ချက်နေတာလား။
မစ္စတာ Rockmantico ဟုသူကပြောသည်
ဆောင်းပါးကောင်း၊ ငါဒီ post ကိုကြိုက်တယ်၊ မင်းကိုနှုတ်ဆက်ချင်ရင် T_T rogelio trolls အမြောက်အများကိုငါရတယ်။
မစ္စတာ Rockmantico မှတုံ့ပြန်ပါ
ကောင်းပြီကောင်းပြီ၊ ရှလကာရည်သည်သင် laostia လူဖြစ်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲသို့ဝင်တိုင်းငါ ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများကိုရှာသည်၊ အမှန်တရားမှာ၊ သင်ကအမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဖြစ်သည်၊ သင်၏အစီအစဉ်များနှင့်ကံကောင်းပါစေ။
Plas, Plas, ဆောင်းပါးသည်ကြီးလှ၏။ သူက Machiavellian လို့မထင်ပါဘူး။ ငါပြောတာနဲ့ ၁၀၀% သဘောတူတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အဲဒါကိုအပြည့်အဝအသုံးချခြင်းကမင်းရဲ့ဘဝကိုစားနိုင်တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဟာဒီတော့ purist မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ရှလကာရည်အကြံပေးချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Public Enemy အားပြန်ပြောပါ
အလွန်ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါး ... ထည့်ရန်မပိုပါ။
ငါဒီမှာရောက်ခဲ့တယ်၊ မင်းရေးခဲ့တာတွေအားလုံးနဲ့အတူ hehe မှတ်ချက်များကိုဖတ်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ငါအမှတ်ရလိုက်သည်။
zatoo xq ကိုစာရင်းသွင်းရန်ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်ကိုစာမပို့ပါနှင့်။ ???
@ Ivánသင်ပေးသောအရာသည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ၊ လူတိုင်းတွင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောအချို့သောဘုံအကျိုးစီးပွားများရှိသည့် forum တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဘလော့ဂ်တစ်ခုတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။
@ toni1004 သည်ခေါင်းစဉ်မှားသည်မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤစာစောင်တွင်နေ့တိုင်းပုံမှန်ဖြစ်ပျက်နေသောအဖြစ်အပျက်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖျက်နိုင်ဘဲဖျက်စရာမလိုဘဲဘာမှမဆိုင်သောမှတ်ချက်တစ်ခုကျန်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဆောင်းပါး၏အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခြင်းသည်တည်နေရာမဟာဗျူဟာကိုသေချာသည်ဟုသင်ပြောသည့်အရာနှင့်ကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ တည်နေရာ (Long Tail ၏အပြင်ဘက်) တိကျသောညှို့အပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်ဤမှတ်ချက်များအတွက်ဘယ်တော့မှနီးပါး။
@forat အညွှန်းများအားလုံးသည်နေရာချထားရန်အရေးကြီးပြီး၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ string ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန် bold နှင့် strong ကိုသုံးပါ။
@Rogelio အမှန်တရားကတော့သင့် site ၏အဓိကအကြောင်းအရာသည် blogging ခေါင်းစဉ်များနှင့်အလားတူအထူးပြုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ထိုအစိတ်အပိုင်းများတွင်လူကြိုက်များသည့် themes များ (ဗီဒီယိုများ၊ တေးဂီတ၊ ဂိမ်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲစသည်တို့) ကိုတွေ့ရလေ့ရှိသော trolls နည်းပါးသည်။
@ Mr. Rockmantico @ သင် Rogelio နှင့်အလွန်ရက်ရောသည်
@Public ရန်သူသည်သင်၏သဘောတရားများအားလုံးကိုအသုံးချရန်မှာအချိန်များစွာကြာသည်ကိုသင်မှန်ပါသည်။ ၎င်းသည်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းကိစ္စဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤမှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုပါကသူတို့အားလုံးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမည်။
@luigix, @ Xperimento1 နှင့် @Neri စာပိုဒ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်မှတ်ချက်ပေးခြင်းအတွက် you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
@joubert သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို အသုံးပြု၍ သင့်တော်သော site ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးသည်။
site ပေါ်တွင်ဂုဏ်ယူပါတယ်! ...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ် ဦး ကအချဉ်နှုတ်ဆက်သည်။
ဤကဲ့သို့သော SEO ဘလော့ဂ်များနှင့် SEO အတွက်ကျွမ်းကျင်သောမှတ်ချက်ပေးသူများကသာသော့ချက်စာလုံးများကိုမှတ်ချက်များထဲတွင်ထည့်နိုင်သည်။ အခြားဘလော့ဂ်များတွင်ဝေဖန်သုံးသပ်သူများမပါ ၀ င်သော၊ ထိုအရာ၏အသေးငယ်ဆုံးအကြံဥာဏ်မရှိသောသူတို့အတွက်ထိုကဲ့သို့မှတ်ချက်ပေးရန်မှာမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီ post ကိုသင်ကောင်းစွာရှင်းပြပါ။ သူတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။
ဥပမာ - ဤအရာကိုပြောရန်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်သော့ချက်စာလုံးကိုမျှဖော်ပြရန်မလိုအပ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်တိုင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမမြင်ရပါ။